မေရီလန်းပြည်နယ် အထက်တန်းကျောင်း၌ ကျောင်းတွင်း သေနတ်ပစ်မှုဖြစ်ပွား သေနတ်ဖြင့် ပစ်သူကျောင်း? - Yangon Media Group
မေရီလန်းပြည်နယ် အထက်တန်းကျောင်း၌ ကျောင်းတွင်း သေနတ်ပစ်မှုဖြစ်ပွား သေနတ်ဖြင့် ပစ်သူကျောင်း?
ဂရိတ်မီးလ်၊ မတ် ၂၁
အမေရိကန်နိုင်ငံ မေရီလန်း ပြည်နယ် စိန့်မေရီစီရင်စုရှိ ဂရိတ် မီးလ်အထက်တန်းကျောင်းတွင် မတ် ၂ဝ ရက်က အသက် (၁၇) နှစ်အ ရွယ်ကျောင်းသားတစ်ဦး၏ သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့မှုကြောင့် ကျောင်းသားနှစ်ဦး ဒဏ်ရာများရရှိကာ ယင်းဒဏ်ရာများဖြင့်ပင် နောက်ပိုင်း၌ သေဆုံးသွားခဲ့ရသည်ဟု စီရင်စုရဲအရာရှိ တင်မိုသီကင်မရွန်က မတ် ၂၁ ရက်တွင် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်သည်။
ယင်းမြို့ကလေးသည် ဝါရှင်တန်တောင်ဘက် မိုင် ၇ဝ ခန့်ဝေး သောနေရာတွင်တည်ရှိပြီး ဖလော်ရီဒါကျောင်းတွင်း သေနတ်ပစ်မှုဖြစ်ပွားပြီး ရက်သတ္တပတ်ငါးပတ်အကြာတွင် ထပ်မံဖြစ်ပွားခြင်း ဖြစ်သည်။ မတ် ၂ဝ ရက် နံနက် ၈ နာရီက ဘော်စတင်ဝိုင်းရိုလင်းဟူ သော ဆယ်ကျော်သက်ကျောင်းသားတစ်ဦးက ပစ္စတိုသေနတ်တစ်လက်ဖြင့် တစ်မိနစ်ကျော်မျှ ပစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး (၁၄) နှစ်အရွယ် ကျောင်းသားတစ်ဦးနှင့် (၁၆) နှစ်အရွယ်ကျောင်းသူတစ်ဦးတို့ သေနတ် ထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ရသည်။
ရဲအရာခံဗိုလ် ဘလိန်းဂတ်စ်ကီးလ်က ကျောင်းဝင်းအတွင်းပြေးဝင်ကာ ပစ်ခတ်သဖြင့် သေနတ်ပစ်သူ ၎င်းကျာင်းသားလည်း သေဆုံးခဲ့ရသည်ဟု စိန့်မေရီစီရင်စုရဲအရာရှိ တင်မိုသီကင်မရွန်က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်သည်။ ဖြစ်ရပ်အား ရဲများကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်သည်။အမေရိကန်စာသင်ကျောင်းနှင့် ကောလိပ်များတွင် လူသေဆုံးရသည့် သေနတ်ပစ်ခတ်မှုများ တစ်လခန့်အတွင်း ဆက်တိုက်ဆိုသလိုပင် ဖြစ်ပွားနေသည်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်က ဖလော်ရီဒါပြည်နယ် ပါ့ခ်လန်းမြို့ရှိ အထက်တန်းကျောင်း၌လည်း အသက် (၁၉) နှစ်အရွယ် ကျောင်းသားဟောင်းတစ်ဦး၏ သေနတ်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သေးသည်။
အခွန်သက်သာခွင့်များ မပါတော့သည့် ၂ဝ၁၈ အခွန် အကောက် ဥပဒေကြမ်းအား လွှတ်တော် အတည်ပြု
ပိုမိုခိုင်မာတောင့်တင်းသော အမေရိကန်နိုင်ငံဖြစ်စေရေး သမ္မတထရန့် တိုက်တွန်း